Wararka - Metformin waxay leedahay sahamin cusub
Qalabaynta alaabta ceeriin
Metformin waxay leedahay helitaan cusub
1.Waxaa lafilayaa inay wanaajiso halista kalida oo shaqeysa iyo dhimashada cudurka kalyaha
Kooxda ka kooban 'WuXi AppTec' ee ka kooban kooxda Medical New Vision ayaa sii deysay war sheegaya in daraasad ay sameeyeen 10,000 oo qof ay muujisay in metformin laga yaabo inuu wanaajiyo halista kalyo xanuun la'aanta iyo dhimashada cudurka kalyaha.
Daraasad lagu daabacay joornaalka American Diabetes Association (ADA) joornaalka “Diabetes Care” (Diabetes Care) ayaa muujisay in daaweynta iyo falanqaynta badbaadada in ka badan 10,000 oo qof ay muujisay in nooca 2-da bukaanka sonkorowga qaba cudurka kalyaha ee joogtada ah (CKD) ay qaataan Metformin ay la xiriirto hoos u dhigista halista dhimashada iyo cudurka dhamaadka kilyaha (ESRD), mana kordhiso halista lactic acidosis.
Cudurka kelyaha ee joogtada ah waa cillad guud ee sonkorowga. Iyadoo la tixgelinayo in bukaanada qaba cudurka kelyaha ee fudud loo qori karo metformin, kooxda cilmi baarista waxay baareen 2704 bukaan oo ku jira mid kasta oo ka mid ah labada koox ee qaata metformin oo aan qaadan metformin.
Natiijooyinka waxay muujiyeen in marka la barbardhigo kuwa aan qaadan metformin, bukaanada qaatay metformin ay leeyihiin 35% hoos u dhigista halista dhimashada oo dhan iyo 33% hoos u dhigista halista horumarka cudurka dhamaadka heerka kelyaha. Faa'iidooyinkaan waxay si tartiib tartiib ah u soo muuqdeen ka dib qiyaastii 2.5 sano oo ay qaadatay metformin.
Sida lagu sheegay warbixinta, sanadihii la soo dhaafay, tilmaamaha US FDA waxay ku talinayaan in la dabciyo isticmaalka metformin ee bukaanka qaba cudurka macaanka nooca 2-aad ee qaba cudurka kalyaha ee joogtada ah, laakiin kaliya bukaanka qaba cudurka kelyaha oo fudud. Bukaannada qaba dhexdhexaad (marxaladda 3B) iyo cudur daran oo kelyaha ah, isticmaalka metformin wali waa muran.
Dr. Katherine R. Tuttle, oo bare-sare ka ah jaamacadda Washington ee dalka Mareykanka, ayaa faallo ka bixisay: “Natiijooyinka daraasadda waa mid lagu kalsoonaan karo. Xitaa bukaanka qaba cudurka kalyaha daran, halista lactic acidosis waa mid aad uyar. Bukaannada qaba sonkorowga nooca 2-aad iyo cudurrada kalyaha ee joogtada ah, metformin waxay u noqon kartaa cabir ka hortag ah oo dhimasho ah iyo Dawo muhiim u ah howlgabka kelyaha, laakiin maadaama tani ay tahay dib-u-eegis iyo daraasad indho-indheyn, natiijooyinka waa in si taxaddar leh loo fasiraa
2. Awoodda daaweynta ee kaladuwan ee daawada sixirka metformin
Metformin waxaa la dhihi karaa waa daawo duug ah oo soo jirtay oo waqti dheer jirtay. Kordhinta cilmi baarista daroogada hypoglycemic, 1957, saynisyahan Faransiis ah Stern wuxuu daabacay natiijooyinkiisa cilmi baaris wuxuuna ku daray lilac soosaarka oo leh waxqabadka hypoglycemic ee digirta riyaha. Alkali, oo loo bixiyay metformin, Glucophage, oo macnaheedu yahay cunista sonkorta.
1994, metformin waxaa si rasmi ah u ansixiyay US FDA si loogu isticmaalo nooca 2aad ee sonkorowga. Metformin, oo ah daroogada awood u leh daaweynta nooca 2aad ee sonkorowga, ayaa lagu taxay daroogada koowaad ee hypoglycemic ee tilmaamaha daaweynta ee kala duwan ee gudaha iyo dibedda. Waxay leedahay faa'iidooyinka saxda ah ee hypoglycemic, halista hypoglycemia, iyo qiimaha hooseeya. Waqtigaan la joogo waa daroogada ugu ballaaran ee la isticmaalo Mid ka mid ah noocyada daroogada hypoglycemic.
Dawo ahaan waqti la tijaabiyey, waxaa lagu qiyaasaa inay jiraan in ka badan 120 milyan oo isticmaaleyaasha metformin adduunka oo dhan ah.
Iyada oo qoto-dheerida cilmi-baarista, awoodda daaweynta ee metformin ayaa si isdaba-joog ah loo ballaariyay. Waxyaabihii ugu dambeeyay ee la soo helay ka sokow, metformin waxaa sidoo kale la ogaaday inay leedahay ku dhowaad 20 saameyn.
1. Saamaynta gabowga
Waqtigan xaadirka ah, Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Mareykanka ayaa ansixiyay tijaabada bukaan socodka ee "isticmaalka metformin si loola dagaallamo gabowga". Sababta ay saynisyahannada ajnebiga ah u adeegsadaan metformin ahaan sidii ay ula tartami lahaayeen daroogada gabowga waxay noqon kartaa maxaa yeelay metformin wuxuu kordhin karaa tirada oksijiinnada oksijiin ee lagu sii daayo unugyada. Iskusoo wada duuboo, tani waxay umuuqataa inay kordhineyso jir dhiska iyo inay dheereyso nolosha.
2. Miisaan dhaca
Metformin waa wakiilka hypoglycemic ee miisaanka dhimi kara. Waxay kordhin kartaa xasaasiyadda insulin-ta waxayna yareyn kartaa isku-darka dufanka. Dad badan oo nooca sonkorta jecel 2, miisaanka oo yaraada laftiisa ayaa ah wax ku habboon xakamaynta xasiloonida sonkorta dhiigga.
Daraasad ay sameeyeen kooxda cilmi baarista ee Barnaamijka Kahortaga Sonkorowga ee Mareykanka (DPP) ayaa muujisay in daraasad indho la'aan ah oo socotey 7-8 sano, bukaanada helay daaweynta metformin waxay lumiyeen celcelis ahaan miisaan dhan 3.1 kg.
3. Iska yaree halista dhiciska iyo dhalmada degdega ah ee haweenka uurka leh qaarkood
Cilmi-baaristii ugu dambeysay ee lagu daabacay The Lancet waxay muujineysaa in metformin laga yaabo inuu yareeyo halista dhicinta iyo dhalmada kahor ee haweenka uurka leh qaarkood.
Sida laga soo xigtay warbixinnada, saynisyahanno ka socda Jaamacadda Sayniska iyo Teknolojiyada (NTNU) iyo Isbitaalka St. Olavs ayaa sameeyay daraasad ku dhow 20 sano waxayna ogaadeen in bukaanada qaba polycystic ovary syndrome ee qaata metformin dhamaadka 3 bilood ee uurka ay yareyn karaan post- muddo dhicin iyo dhicis. Khatarta dhalashada dhiciska ah.
4. Kahortag caabuqa uu sababo qiiqu
Natiijooyinka daraasadda ayaa muujisay in kooxda uu hoggaaminayo Professor Scott Budinger oo ka tirsan Jaamacadda Woqooyi-galbeed ay jiir ku xaqiijiyeen in metformin ay ka hortagi karto caabuq uu sababo qiiqa, kana hortago unugyada difaaca inay ku sii daayaan meykole khatar ah dhiigga, joojinta sameynta xinjirowga halbowlaha, sidaasna lagu sameeyo yaree nidaamka wadnaha. Halista cudurada.
5. Difaaca wadnaha
Metformin waxay leedahay saameyn difaac wadnaha iyo xididada waxaana hada ah daawada kaliya ee hypoglycemic oo ay ku talisay tilmaamaha sonkorowga oo leh cadeyn cad oo ku saabsan faa'iidada wadnaha. Daraasaduhu waxay muujiyeen in daaweynta muddada dheer ee metformin ay si weyn ula xiriirto hoos u dhaca halista cudurrada wadnaha iyo xididdada ee bukaannada cusub ee cudurka macaanka qaba ee nooca 2 iyo nooca 2 ee bukaanka sonkorowga ah ee horeyba u soo maray cudurrada wadnaha iyo xididdada.
6. Hagaajinta cilladda ugxan-sidaha ee 'polycystic ovary syndrome'
Cudurka ugxan-sidaha ee 'polycystic ovary syndrome' waa cudur kaladuwan oo lagu garto cudurka 'hyperandrogenemia', cillad ugxan-yaraha, iyo qaab-dhismeedka ugxan-sidaha polycystic Cudur-keenisteedu ma cadda, bukaannaduna badanaa waxay leeyihiin heerar kala duwan oo ah hyperinsulinemia. Daraasaduhu waxay muujiyeen in metformin uu yareyn karo caabbinta insulin-ta, soona celin karto shaqadii ugxansiga, iyo hagaajinta hyperandrogenemia.
7. Hagaaji dhirta mindhicirka
Daraasaduhu waxay muujiyeen in metformin uu soo celin karo saamiga ubaxyada mindhicirka iyo inuu wax ka beddelo jihada ku habboon caafimaadka. Waxay siisaa jawi nololeed faa'iido leh bakteeriyada waxtarka leh ee mindhicirada, taas oo hoos u dhigeysa sonkorta dhiigga isla markaana si wanaagsan u nidaamineysa nidaamka difaaca jirka.
8. Waxaa la filayaa inay daweyso qaar ka mid ah Autism-ka
Dhawaan, cilmi-baarayaasha Jaamacadda McGill waxay ogaadeen in metformin uu daaweyn karo noocyo ka mid ah Fragile X syndrome oo leh autism, daraasaddan hal-abuurnimada ahna waxaa lagu daabacay joornaalka Nature Medicine, oo ah qayb-hoosaadka Dabeecadda. Xilligan la joogo, Autismku waa mid ka mid ah xaaladaha caafimaad ee badan ee saynisyahannadu rumaysan yihiin in lagu daaweyn karo metformin.
9. Dib-u-dhaca sambabka sambabka
Baarayaasha Jaamacadda Alabama ee Birmingham waxay ogaadeen in bukaanka bini'aadamka ee qaba idiopathic pulmonary fibrosis iyo moodellada sambabada fibrosis ee ay sababaan bleomycin, waxqabadka AMPK ee unugyada fibrotic-ka ayaa hoos u dhacaya, unugyada ayaa iska caabiya unugyada. Myofibroblast apoptotic-ka ayaa kordhay.
Isticmaalidda metformin si loogu hawlgeliyo AMPK myofibroblasts waxay dib u dareemi kartaa unugyadan apoptosis. Intaa waxaa dheer, qaabka jiirka, metformin wuxuu dardargelin karaa baabi'inta unugyada fibrotic ee horey loo soo saaray. Daraasadani waxay muujineysaa in metformin ama agonistayaasha kale ee AMPK loo isticmaali karo in lagu beddelo fibrosis-ka horey u dhacay.
10. Ka caawi joojinta sigaarka
Baarayaasha Jaamacadda Pennsylvania waxay ogaadeen in isticmaalka nikotiinka muddada-dheer uu u horseedi karo firfircoonida dariiqa calaamadaha AMPK, oo la joojiyo inta lagu jiro ka bixitaanka nikotiinka. Sidaa darteed, waxay ku soo gabagabeeyeen in haddii daawooyinka loo isticmaalo in lagu kiciyo dariiqa calaamadaha AMPK, waxay yareyn kartaa jawaab celinta.
Metformin waa agonist AMPK. Markii ay cilmi baarayaashu siiyeen metformin jiirka ka baxay nikotiinka, waxay ogaadeen inay yareysay ka bixitaanka jiirka. Daraasaddooda waxay muujineysaa in metformin loo isticmaali karo in lagu caawiyo joojinta sigaarka.
11. Saamaynta anti-bararka
Markii hore, daraasado daaweyn iyo daaweyn caafimaad ayaa muujiyay in metformin aysan hagaajin karin oo keliya caabuq daba dheeraada iyadoo la hagaajinayo xuduudaha dheef-shiid kiimikaadka sida hyperglycemia, caabbinta insulin iyo atherosclerotic dyslipidemia, laakiin sidoo kale waxay leedahay saameyn toos ah oo anti-bararka.
Daraasaduhu waxay tilmaameen in metformin uu xakameyn karo caabuqa, inta badan iyada oo loo marayo AMP-firfircoon protein kinase (AMPK) - ku tiirsanaan ama madax-bannaanida ka-hortagga qodobka qorista nukliyeerka B (NFB).
12. Diidmo xagga garashada ah
Baarayaasha Jaamacadda Texas ee Dallas waxay abuureen moodal jiir oo u ekeysiinaya cillad garasho la xiriirta xanuunka. Waxay u adeegsadeen qaabkan si ay u tijaabiyaan waxtarka daroogooyinka kala duwan.
Natiijooyinka tijaabada ah waxay muujinayaan in daaweynta jiirka oo leh 200 mg / kg miisaanka jirka ee metformin muddo 7 maalmood ah ay gabi ahaanba beddeli karto naafonimada garashada ee xanuunka keena.
Gabapentin, oo daweeya neuralgia iyo suuxdin, ma leh saameyn noocaas ah. Tani waxay ka dhigan tahay in metformin loo isticmaali karo sidii daawo duug ah oo lagu daaweeyo cillad garashada garashada bukaanka qaba neuralgia.
13. Ka hortag koritaanka burooyinka
Dhowr maalmood ka hor, sida laga soo xigtay Singularity.com, aqoonyahanno ka socda Machadka Yurub ee Oncology waxay ogaadeen in metformin iyo soonku u shaqeyn karaan si iskaashi ah si looga hortago koritaanka burooyinka jiirka.
Daraasad dheeri ah, waxaa lagu ogaaday in metformin iyo soonku ay joojinayaan koritaanka burooyinka iyada oo loo marayo dariiqa PP2A-GSK3β-MCL-1. Cilmi baarista waxaa lagu daabacay unugyada Kansarka.
14. Wuxuu kahortagi karaa xumaanshaha maqaarka
Dr. Yu-Yen Chen oo ka socda Taichung Veterans General Hospital oo ku yaal Taiwan, Shiinaha ayaa dhowaan ogaadey in dhacdooyinka ku dhaca da'da ee la xiriirta daweynta maskaxda (AMD) ee bukaannada qaba nooca sonkorowga 2 ee qaata metformin ay aad u hooseyso. Tani waxay muujineysaa in inta la xakameynayo sonkorowga, hawlaha ka hortagga bararka iyo antioxidant ee metformin ay leeyihiin saameyn difaac ah AMD.
15. Ama daweyn karaa timo daadashada
Kooxda Huang Jing, oo ah saynisyahan u dhashay Shiinaha kana tirsan jaamacadda California, Los Angeles, waxay ogaadeen in dawooyinka ay ka mid yihiin metformin iyo rapamycin ay kicin karaan timaha xididdada ku jira qaybta jiirka ee jiirka si ay u galaan wajiga koritaanka iyo kor u qaadista timaha. Cilmi-baaris la xiriirta ayaa lagu daabacay joornaalka caanka ah ee cilmiga tacliinta.
Intaa waxaa dheer, markii saynisyahannadu adeegsadeen metformin si loogu daaweeyo bukaanada qaba polycystic ovary syndrome ee Shiinaha iyo Hindiya, waxay sidoo kale ogaadeen in metformin uu la xiriiro yaraynta timaha.
16. Da'da bayooloji noqoshada
Dhawaan, bogga rasmiga ah ee joornaalka caalamiga ah ee sayniska iyo tikniyoolajiyadda "Nature" ayaa daabacay war xaddidan. Warbixinadu waxay muujinayaan in daraasad yar oo caafimaad oo ka dhacday California ay muujisay markii ugu horreysay inay suurtagal tahay in dib looga noqdo saacadda epigenetic-ka aadanaha. Sanadkii la soo dhaafey, sagaal mutadawiciin caafimaad qaba ayaa qaatay isku dar ah hoormoonka koritaanka iyo laba daroogo sonkorow ah, oo ay ku jiraan metformin. Waxaa lagu cabiray iyadoo la falanqeynayo astaamaha ku saabsan hiddo sidaha qofka, da'diisa bayooloji ayaa hoos u dhacday celcelis ahaan 2.5 sano.
17. Daawada isku dhafka ah waxay daaweyn kartaa kansarka naasaha oo saddex-geesood ah
Dhowr maalmood ka hor, koox uu hoggaaminayo Dr. Marsha hodan rosner oo ka tirsan Jaamacadda Chicago waxay ogaadeen in isku-darka metformin iyo daroogo kale oo duug ah, heme (panhematin), ay beegsan karto daaweynta kansarka naasaha ee saddex-geesoodka ah ee khatarta ku ah caafimaadka haweenka. .
Waxaana jira caddeyn ah in istiraatiijiyaddan daaweynta ay waxtar u yeelan karto kansarro kala duwan sida kansarka sanbabada, kansarka kalyaha, kansarka makaanka, kansarka qanjirka 'prostate' iyo kansarka 'myeloid leukemia' daran. Cilmi baaris la xiriirta ayaa lagu daabacay joornaalka ugu sareeya ee Nature.
18. Waxay yareyn kartaa saameynta xun ee glucocorticoids
Dhawaan, "The Lancet-Diabetes and Endocrinology" ayaa daabacay daraasad-natiijooyinka daraasadda ayaa muujisay in marxaladda 2 ee tijaabada caafimaadka, metformin loo isticmaalo bukaanada qaba cudurada dabadheeraad ah ee joogtada ah waxay hagaajin karaan caafimaadka dheef-shiid kiimikaadka waxayna yareyn karaan daaweynta glucocorticoid Dhibaatooyinka daran.
Tijaabooyinku waxay soo jeediyeen in metformin uu ku dhaqmi karo borotiinka dheef-shiid kiimikaadka muhiimka ah ee AMPK, habka ficilku wuxuu dhab ahaan ka soo horjeedaa glucocorticoids, wuxuuna leeyahay awood uu ku beddelo waxyeellooyinka ka dhasha isticmaalka ballaaran ee glucocorticoids.
19. Waxaan rajeyneynaa in aan daaweyno cudurka 'sclerosis multiple'
Markii hore, koox cilmi-baaris ah oo uu hoggaaminayo Robin JM Franklin oo ka tirsan Jaamacadda Cambridge iyo xertiisa Peter van Wijngaarden ayaa maqaal ku daabacay joornaalka ugu sarreeya "Cell Stem Cells" in ay heleen nooc gaar ah oo gaboobay unugyada jir-dhiska neerfaha ee ka soo kaban kara daaweynta ka dib metformin. Iyada oo laga jawaabayo calaamadaha kor u qaadista kala-soocida, waxay u muuqataa firfircoonida dhalinyarada waxayna sii kordhineysaa dib-u-cusbooneysiinta dareemayaasha myelin.
Daahfurkaani wuxuu ka dhigan yahay in metformin la filayo in loo isticmaalo daaweynta cudurada la xiriira neurodegeneration ee aan laga soo kaban karin, sida sclerosis badan.
Waqtiga boostada: Abriil-21-2021
Lambarka 301, Bldg. 1, 1555 Songpu Rd. (E), Nanbin St., Rui'an, Zhejiang, Shiinaha. 325207
Right Xuquuqda daabacaadda - 2021: Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay.